Amanothi wokuletha - Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
Isaziso ngaphambi kwe-oda:
(1) Izingxenye zifakiweImodyuli ye-LED, ikhebula lesiginali phakathi kwamamojula, ikhebula lamandla phakathi kwemodyuli nokunikezwa kwamandla
(2) Thenga amamojula weqoqo elifanayo: ukugwema ukugqama nomehluko wombala kusikrini esisodwa, kufanele uthenge amamojula weqoqwana elifanayo. Okusho ukuthi, kufanele uthenge amamojula wesikrini esisodwa nge-oda elilodwa elivela kithi.
(3) Ukuqapha: Amamojula ethu e-LED NGEKE isetshenziswe njengezingxenye zokugcina zesibonisi sakho esidala se-LED. Thina unganikeli usizo lobuchwepheshe noma insizakalo uma usebenzise amamojula ethu e-LED ukufaka esikhundleni samamojula amadala e-LED akhona.
(4) Imali ekhokhwayo: intengo yethu ayifaki noma yimaphi amanani entela noma imisebenzi lapho uya khona, kufanele ungenise imvume yokungenisa ngaphakathi ezweni futhi ukhokhe yonke intela noma imisebenzi yangakini.
1. Amanani entengo wezinto awafaki izindleko zokuthumela. Ungahlola izindleko zokuthumela ekhasini lenqola yokuthenga ngemuva kokukhetha ubuningi bento nendawo oya kuyo.
I-2.DHL expression iyindlela ezenzakalelayo. Ezinye ezinjenge-EMS, i-UPS, i-FedEX ne-TNT zizokwamukelwa kuphela uma i-DHL ingatholakali noma ingafanelekile lapho uya khona; Uma ungathanda ukuthumela izimpahla ngolwandle noma ngendiza, sicela uxhumane nathi ukuthola imininingwane.
3. Sizoqhubeka ne-oda lakho zingakapheli izinsuku ezimbili zokusebenza ngemuva kokuthola inkokhelo. Sizokwazisa kabusha olunye usuku lokulethwa olusheshayo uma izimpahla zingasekho esitokweni.
4. Sithumela kuphela ekhelini eliqinisekisiwe le-oda. Ngakho-ke ikheli lakho kufanele lifane nekheli lokuthumela. Sicela uqinisekise ikheli lokulethwa ku-akhawunti yakho uma ukhokha ngeWester Union noma abanye.
5. Isikhathi sokuhanjiswa kwempahla sihanjiswa nguthwali futhi asibandakanyi izimpelasonto namaholide. Isikhathi sokuhamba singahluka, ikakhulukazi ngesikhathi samaholide.
6. Sicela usazise uma ufuna ukwehlisa inani lomkhiqizo ku-invoyisi yokuthumela ukuze ugweme noma wehlise intela yamasiko ohlangothini lwakho. Uma kungenjalo, sizosebenzisa inani langempela njengoba likhokhiwe.
7. Uma kudingeka, sicela usize ikhuriya ukuthola usizo oludingekayo maqondana nokuvunyelwa kwempahla yangakini.
8. Sicela uhlole izinto phambi kwekhuriya lapho zifika. Uma izimpahla zonakele, sicela uzame ukuthola ubufakazi obubhalwe phansi be-courier bendawo mayelana nokwehlukana, okwamanje, sicela usithumele i-imeyili ngezithombe noma amavidiyo okupakisha kanye nemikhiqizo ngokushesha okukhulu.
9. Uma ungakatholi ukuthunyelwa kwakho ezinsukwini eziyi-15 kusukela ngosuku lokukhokha, sicela uxhumane nathi. Sizolandelela ukuthunyelwa bese sibuyela kuwe ASAP.
10. Imikhiqizo e-odiwe ngeke ikujabulele ukubuya kanye newaranti uma amakhodi abo esusiwe.
11. Sinikeza iwaranti esezingeni eliyiminyaka emibili emikhiqizweni eminingi yethu ethengisiwe (imigomo ekhethekile ingaphansi kwe-Invoyisi Yokugcina kaProforma.).Uma kukhona noma yikuphi ukukhubazeka okusetshenziswa ngokujwayelekile ngalesi sikhathi, sizokulungisa noma sikubuyisele mahhala efektri yethu. Amakhasimende anesibopho sokuthumela.